नेपाली कांग्रेस सडक–सदन दुवैतिर कमजोर spacekhabar
नेपाली कांग्रेस सडक–सदन दुवैतिर कमजोर
स्पेसखबर काठमाडाैं, ६ असाेज
कांग्रेस केन्द्रसहित सातै प्रदेशमा सरकार बाहिर छ। स्थानीय सरकारमा पनि उसको उपस्थिति कमजोर छ। प्रदेश २ को सरकारमा कांग्रेसले प्रतिपक्षको हैसियतसमेत पाएको छैन। संसद् प्रतिपक्षको हुने सैद्धान्तिक मान्यता छ तर संघ र प्रदेशका संसद्मा हुने गतिविधिले त्यसो भन्दैनन्। परम्परागत शक्तिशाली पार्टीको उपस्थिति संसद्मा प्रभावी छैन। त्यसैको झोक फेर्न हुन सक्छ, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मुखै खोले, ‘सडकमा रेलिङ र सदनमा कुर्ची नभाँचेको भएर हामीलाई हेपेको ? ’
प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति लक्ष्य गरेरै देउवाले यस्तो आक्रोश पोखेका थिए तर सदनमा प्रतिपक्षको भूमिका बलियो बनाउन उनी आफैंले कस्तो भूमिका खेले त भन्ने प्रश्न भने पार्टीभित्रैबाट देउवाले बारम्बार सामना गर्नुपरेको छ। लाउडा जहाज भाडा प्रकरणमा तत्कालीन एमालेले ५७ दिन संसद् अवरुद्ध गर्दा वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा किन कांग्रेसले एक दिन संसद् अवरुद्ध गरेन ? बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ३३ किलो सुनकाण्ड, भारतीय दबाबमा तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण रोक्ने सरकारको निर्णयलगायत भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा किन कांग्रेसले संसद् तताउन सकेन ? पार्टीभित्रैबाट देउवालाई बारम्बार सोधिने प्रश्न हुन् यी।
कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाका अनुसार संख्यात्मक रूपमा कमजोर हुनु मात्रैले कांग्रेस संसद्मा निष्प्रभावी भएको होइन। सदनमा विपक्षीको संख्या जहिल्यै कमजोर हुन्छ। बलियो बन्न सडकसँग सदनलाई एकाकार गर्नुपर्छ। ‘सडकले दबाब दिन सक्यो भने मात्रै सरकारले टेर्छ, जस्तो कि, बाँके घटना र गुठी विधेयकका विषयमा सडकको दबाबले सरकार पछि हट्नुपरेको थियो,’ थापाले भने।
सदन मात्रै होइन, कांग्रेस सडकमा पनि कमजोर छ। पार्टीले सञ्चालन गरेको दोस्रो चरणको जागरण अभियान सकिन लाग्दासमेत कांग्रेसले भ्रष्टाचार र अनियमितताका ठूला काण्डका विरुद्ध सडक तताउन सकेको छैन। जागरण अभियान ‘केही नहुनुभन्दा यति भए नि राम्रो’ भन्ने शैलीमा चलिरहेको छ। सडक बलियो बनाउन केन्द्रको आदेशभन्दा पार्टीको संगठन चुस्त हुनुपर्छ।
संगठन चुस्त बनाउन पार्टीका निकाय र भ्रातृ संस्था क्रियाशील हुनुपर्छ। अहिले यो दुवै छैन। पार्टीका २८ वटा विभाग गठन गरेको भए १ हजार ४ सय नेता–कार्यकर्ताले काम पाउँथे। महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र गठन भइसक्नुपर्ने विभाग कार्यकाल सकिन लाग्दासम्म देउवाले गठन गर्न सकेनन्। विवादमा परेर विघटित केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति पुनः गठन भएको छैन। केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति नबन्दा विधानमै नभएको पदाधिकारी बैठकको अभ्यास गरिँदै आएको छ। १३ वटा भ्रातृ संस्थामा ५ वटाबाहेक सबैको कार्यकाल सकिएको छ।
आधा दर्जनभन्दा बढी भ्रातृ संस्था तत्कालीन कांग्रेस र कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) कै समायोजनको स्वरूपमा छन्। तिनको अधिवेशन गरेर क्रियाशीलता बढाउन नेतृत्वले सकेको छैन। पार्टीको निर्देशन नपाएर वर्षौंदेखि तिनको अधिवेशन हुन सकेको छैन। अधिवेशन नहुँदा सबैजसो भ्रातृ संस्था यति बेला कि विवादमा छन्, कि निष्क्रिय।
सडक परिचालनमा भ्रातृ संस्थाको मुख्य भूमिका हुन्छ। सडक तताउने भूमिकामा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) सबभन्दा अग्रपंक्तिमा रहने गर्थ्यो। त्यसपछि मात्रै तरुण दल, महिला संघलगायत अन्य भ्रातृ संस्था जोडिन्थे। संघ र दल अहिले छिन्नभिन्न छन्। औपचारिकताबाहेक कुनै पनि भ्रातृ संस्थाले अहिले सडकमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेका छैनन्। बरु सार्वजनिक मञ्च र कार्यक्रममा एकअर्काप्रति आरोप/प्रत्यारोप र पार्टी नेतृत्वको विरोधमै समय गुजार्ने गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद पछिल्ला समय भ्रातृ संस्थाहरूले काम देखाउन नसकेको स्विकार्छन्। कान्तिपुरमा खबर छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज ६, २०७६, ०८:५१:००